Isu tese tinowanzo chengeta akakosha magwaro uye mifananidzo muMapepa, Mifananidzo uye Desktop maforodha. Ese aya maforodha ari mune yako system dhiraivha (kupi Windows 10 yakaiswa) nekutadza, zvichireva kana iwe dzorerazve Windows 10 or ita chigadzirwa chakachena che Windows 10, aya maforodha uye mafaera ari mavari anobviswa.
Nekuda kweizvi, pane gadziriro mu Windows 10 uye mavhezheni ekutanga kuti achinje nzvimbo isipo yeDesktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha. Nekudaro, vashoma vashoma vanoendesa mafolda aya uye vanorasikirwa nedhata ravo vachiri kuisazve Windows uchishandisa system. Kuti uchinje nzvimbo isipo, tarisa kune yedu maitiro ekufambisa Desktop, Zvinyorwa, Kurodha pasi, uye Mifananidzo maforodha kune imwe dhiraivha mutungamiri.
Kana uripo Windows 10 uye uchishandisa OneDrive, unogona kushandura iyo yekumusoro nzvimbo yeDesktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha kune OneDrive kubva kuiyo system folda. Sezvo iwe uchiziva, kuve nedata mune yegore account ndeimwe yenzira dzakanakisa kunze uko kwekuchengetedza yako data.
Kubatsira kwekuchengetedza Desktop, Zvinyorwa uye Mifananidzo mafolda muOneDrive ndekwekuti haufanire kuita manyorerwo aya maforodha kana mafaera mumafaira aya sezvo ari kutsigirwa otomatiki.
Paunosarudza OneDrive senzvimbo yekumira, Windows 10 inogadzira Desktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha mune yako OneDrive account. Ese mafaera emafaira uye emafaira aunogona kusevha mumafaira aya anozongochengetwa otomatiki muOneDrive account.
Vashandisi vane makumi emazana eGGs emahara nzvimbo muOneDrive vanofanirwa kufunga nezvekushandura nzvimbo yekumisidzana yeDesktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha kune OneDrive mu Windows 10.
INOKOSHA: Paunodzima faira kana dhairekitori kubva kune imwe yeaya maforodha, ichabviswa kubva kuOneDrive futi.
Sevha desktop, zvinyorwa uye mifananidzo maforodha kune OneDrive mu Windows 10
Pedzisa mafambiro ekuchengetedza Desktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha kune yako OneDrive account.
Step 1: Kungofa pane iyo OneDrive icon mune ye system tray nzvimbo yebara rebasa uye wobva wadzvanya Settings kuvhura OneDrive zvivakwa dialog.
Step 2: Tendeukira kune Auto Save Tab. Under Desktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo chikamu, iwe uchaona sarudzo kusarudza nzvimbo yekuchengetedza yako Desktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha.
sarudza OneDrive kubva kubhokisi rekudonhedza padivi pemafaira matatu aya kana sarudza OneDrive yefaira iyo iwe yaunoda kusevha muOneDrive.
Tinokurudzira kuti uchengetedze kanenge maFolda neMifananidzo maforodha kuOneDrive, kunyanya kana iwe uine TBs yenzvimbo mune yako OneDrive account.
Step 3: Tevere, iwe unowana inotevera dialog bhokisi. Dzvanya Sarudza maforodha bhatani.
Step 4: Sync yako OneDrive mafaera kune iyi PC dialog ichaonekwa pane yako skrini izvozvi. Sarudza Desktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo maforodha (kana maforodha aunoda kusevha muOneDrive) wobva wadzvanya OK bhatani.
Ndizvo! Kubva ikozvino zvichienda mberi, mafaera aunochengeta mune aya maforodha anongo chengetwa muakaundi yako yeOneDrive. Ndokumbira utarise kuti mafaira aripo mumafaira aya haazochengetwe muOneDrive account
Kana iwe ukavhura iyo File Explorer, iwe uchaona green green mamaki paDesktop, Zvinyorwa, uye Mifananidzo (kana maforodha awakasarudza) kuratidza aya maforodha akawiriraniswa.
Otomatiki Backup Desktop, Zvinyorwa & Mifananidzo Kune OneDrive Mu Windows 10
Gadzirisa: Yako OneDrive Dhairekita Haigone Kugadzirwa Mune Iyo Nzvimbo Yasarudza